प्रेमको गज्जव उदाहरण : २५ वर्षदेखि पतिको पर्खाइमा श्रीमती जसु ऐरी « Anumodan National Daily
By : - गोकर्ण दयाल
बैतडी । रोजगारीका लागि भारत गएका श्रीमानले ‘छिट्टै फर्किन्छु , प्रतिक्षा गरेर बस्नु’ भनेको बचन जसु ऐरीको कानमा ठोक्किन थालेको २५ वर्ष पूराभयो, श्रीमान फर्केका छैनन् ।
यो कुनै फिल्मको कथा होइन । २५ वर्षदेखि पतिको बाटो कुर्दै बस्नु भएकी बैतडीको सिगास गाउँपालिका–१, की जसु ऐरीको पीडा हो ।
रोजगारीका लागि परदेश (भारत) गएका श्रीमान हिक्मतबहादुर ऐर २५ वर्षसम्म घर नफर्केपछि भगवान पूकार्दै जसु भन्छिन्–‘आधाजुनी बितिसक्यो, प्रिय अब त घर फर्कनु न ! ’ भगवानले पनि जसुको पूकार नसुनेरै होला ! अहिलेसम्म उनका श्रीमानको न चिठ्ठी पत्र आएको नत कुनै हालखबर नै ।
१६ वर्षे उमेरमा विवाह हुँदा रिलवाला क्यामेराले खिचेको तस्बिर हेर्दै पतिको बाटो कुर्दै जसु ऐरीका २५ वर्ष बितिसकेका छन् ।
गाउँको बाटो राती कसैले टर्चलाईट बालेर हिँड्दा जसु ऐरी अझैं पनि झरो÷टुकी बालेर आँगनको डिलमा गएर हेर्छिन् । २५ वर्षदेखिको पीडा सुनाउँदै जसु ऐरी भन्छिन्, ‘राति कुुकुर भुक्दा पनि झसङ्ग हुन्छु ! भगवानले कतै दुःखीको बचन सुनेर पति फर्किन्छन कि ! भनेर आश लागिरहन्छ ।’
जसु ऐरीले श्रीमानको प्रतिक्षा गरेको २५ वर्षमा घरको छानो चुहिएर बार्दलीबाट स्लेट खस्न थालेका छन् । झ्याल ढोका मक्कीईसके । पतिले घर छोड्दा खेत जोत्ने हल गोरु फेरिइसके । दौतरींका छोराछोरी जन्मेर नाति नातिना पनि भईसके । जसुका एउटा पनि सन्तान छैनन् । छ त केवल रोजगारीका लागि विदेश गएका पतिको याद । अनि पतिको प्रतिक्षा गर्दै २५ वर्षदेखि बल्झीएको पीडाको घाउ ।
अब त अति भयो ! भन्दै घर परिवार र माइतीले जसुलाई सुझाव दिन थालेका छन् ‘तिम्रो पति बेपत्ता भईसक्यो । अब कुनै आश नगर ।’ गाउँलेहरुले पनि भन्न थालेका छन् ‘अब तिम्रो जाने ठाउँ कही छैन । श्रीमानको काजकिरिया गरेर एकल महिलाको सूचीमा नाम लेखाऊ । ’
यस्ता वचन सुन्दा जसुका आँखाबाट बरर्र आँसु झर्छन् । टिनको बाकसबाट धमिलो एल्बम निकाल्दै ऐरी भन्छिन्, ‘यी हेर्नुस् विवाहमा लगाएको साडी यही हो । श्रीमानको मायाले जतन गरेर राखेकी छु । बाकसमा थन्क्याएका लुगा लगाउँनै मन लाग्दैन ।
मेरो पीडाको घाउ निको पार्ने कुनै ओखती छैन’ जसुले भन्नुभयो ‘श्रीमान फर्किने आशमा माइतीसमेत गईन । दोस्रो विवाह गर्ने कुरा त सोच्दा पनि सोचिन । सायद म अभागिनी दुःख पाउनकै लागि जन्मेकी हुँ । त्यसैले यी सारा कुरा भोग्दैछु ।’
खेतीपाती गर्नु, वस्तुभाउ स्याहार्नु । मेलापात गर्नु ऐरीको नियमित काम हो । जसु भन्छिन् ‘यो सबै काम नगरे खान पुग्दैन । आफैलाई विधवा महिला कसरी भनौ । पतिको मृत्यु भयो पनि कसरी भनौ ? तर, पतिको न सासको ठेगान छ न त लाशको । प्रतिक्षा गर्नु बाहेक मेरो धर्मले अरु के नै गर्न सक्छ र ?’
गाउँमा कुनै रोजगारी नहुँदा सिगास गाउँपालिकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेहरु अहिले कोरोनाका कारण घर फर्किनेको संख्या निकै बढेको छ तर, जसुका श्रीमान फर्केका छैनन् ।
पतिको कतै खबर पाईन्छ कि भनेर जसु ऐरी अहिले पनि भारतबाट घर फर्किनेहरुलाई भेटिरहने गर्छिन् । कतै नभेटिएको र पत्ता नलागेको कुरा सुनेर उनी निराश हुँदै घर फर्किने गर्छिन् ।
सिगास गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष गगनसिंह धामीले जसु ऐरीलाई एकल महिला भन्न पनि कानुनी अडचन भएको बताए । अध्यक्ष धामीले भने, ‘महिलाको अवस्था देख्दा निकै दुःख लागेको छ । श्रीमानको मृत्यु दर्ता नहुन्जेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि गाह्रो छ ।’
स्थानीय तहको सरकाले आफू जस्ता एकल महिलाका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको जसु ऐरीले बताइन । हातमुख जोर्न पनि धौधौ परेको पीडा सुनाउँदै जसुले भनिन, ‘मेरो त कुनै सहारा छैन । बाँकी जीवन कसरी बिताउने होला ? लामो सुस्केरा हाल्दै जसु भन्छिन्–‘गाउँमै सरकार आएको छ भन्छन् ख्वै ! मेरो पीडा कसैले पनि सुनेन !’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो प्रकाशित छ ।